Isu takaona akawanda emafoni efoni anokwanisa kuita zvisingafungidzike, asi mujaho wekuwana zvimwe haumire kana kutononoka. Ndozvazvaive zvakaita neHuawei P30 Pro, iyo yakavhurwa nguva pfupi yadarika pachiitiko muParis "kunyora zvakare mitemo yekutora mifananidzo."
Sezvazvinoitika, izvo zvaisangova zvirevo zveushingi uye iyo P30 Pro iri chaizvo inokwanisa kuburitsa rakanakisa rekutora mifananidzo izvo zvinokonzeresa kutyisidzira kuri pedyo kune izvo zvinoda zveApple uye Samsung yazvino mireza. Huawei P30 Pro inogadzira poindi yakasimba mune nharembozha yekutora mifananidzo neayo quad-kamera setup.
sezvo Huawei P30 Pro kuongorora iri kuenderera mberi, ndakafunga kutora kamera yefoni kuti ibude nekukurumidza. Nezvinhu zvinoyevedza senge 50x zoom, inoshamisa yakaderera-mwenje kugona, yakagadziridzwa backlit portraits uye nezvimwe, ndakafunga kuyedza zvimwe zvezvimiro uye izvi ndizvo zvandakawana.
Uswedere usaswedere padyo
Huawei P30 ProKuburitsa kugona kunoshamisa. Iyo lens yezozo muhukuru inowana 5X zoom zoom, 10X hybrid zoom uye 50X digital zoom. Ndakaedza kugona kuburitsa pamatanho ese uye kuti smartphone ikwanise kuzadzisa mhedzisiro iyi inonakidza feat.
Huawei P30 Pro kamera kuongororaIBTimes India / Sami Khan
Ini ndinogona kukwira ku10X zoom ndisina kurasikirwa nehuwandu uye kuenda kumusoro kwe50X zoom, izvo zvisingaite pane mamwe mafoni, pachawo chinhu chinorumbidzwa kuita. Idzo dzakachengetwa neHuawei P30 Pro ku50x zoom haisi inonakidza, asi inoita zvirinani pane chero smartphone iriko kunze, inosanganisira iPhone XS Max uye Samsung Galaxy S10 +.
Rega mapikicha ataure.
Huawei P30 Pro kamera kuongorora (1X) IBTimes India / Sami Khan
Huawei P30 Pro kamera kuongorora (5X) IBTimes India / Sami Khan
Huawei P30 Pro kamera kuongorora (10X) IBTimes India / Sami Khan
Huawei P30 Pro kamera kuongorora (50X) IBTimes India / Sami Khan
Paris inzvimbo inosvika neyakawanda nzvimbo yekutora tsvarakadenga tsananguro uye iyo P30 Pro yainzwa sekunge yakanangidzirwa guta iro rakanaka.
Huawei P30 Pro kamera kuongorora (50X) Shot kubva kunzvimbo: Iyo Louvre MuseumIBTimes India / Sami Khan
Pane kusahadzika kushoma mune izvo Huawei P30 Pro inokwanisa kuona. Icho chiri kutopikisa ziso revanhu munzvimbo iyoyo.
Huawei yaive neimwe yeakanakisa ekupedzisira-yakafara-enguru lens mukati Mateo 20 Pro uye izvo zvave zvavandudzwa muP30 Pro nekuvandudzwa kunonyanya kudikanwa. Iyo nzvimbo yakafukidzwa neiyo Ultra-wide-angle lens yeHuawei P30 Pro inoramba yakafanana, asi kushandiswa kwemapikseli nekutanga-kwe-kwayo-kwerudzi RYYB sensor kunoita mamwe mashiripiti chaiwo.
Huawei P30 Pro inokwanisa kuwana echisikigo mavara, akakwirira akasimba renji uye zvine mwero kuratidzwa. Ehezve, mhedzisiro yacho haisi yemapikicha epamusoro akatorwa mune yakajairwa 1x zoom, asi zvakaoma kuona nzvimbo dzainoshaya. Ini ndakakwanisa kumira panzvimbo imwechete ndokutora nzvimbo yese yakatenderedza pandanga ndichifamba kunze kweLouvre Museum muParis.
Ona zvawanikwa iwe.
Ino inguva yekuonekana kuti udzokere kumashure kuti uwane hombe furemu.
Huawei P20 Pro's monochrome sensor yaive yeimwe yandaifarira maficha uye mhedzisiro yacho yaishamisa. Iwo anoshamisa madhata akabatwa neiyo P20 Pro mune nhema uye chena haigone kuve nani. Mune iye akatsiva, ini ndaitarisira kuti kwaive nemamwe marudzi ekuvandudza kune iyo monochrome uye chakandishamisa, Huawei akafunga kudzikisa iyo sensor zvachose.
Mushure mekuona chikonzero kumashure kwesarudzo yakaoma, zvine musoro. Huawei akawana Ultra-wide-angle uye telephoto lens parutivi rweToF sensor kuti uwane mamwe mashoko asina kumbowanikwa. Kuti achengete vateveri vemu monochrome sensor vachifara, Huawei akawedzera Monochrome firita, iyo inoshandisa software kushandura mafoto kuva nhema uye chena.
Huawei P30 Pro kamera ongororo (Monochrome) IBTimes India / Sami Khan
Mhedzisiro yacho - ini handina kunyadziswa zvachose. Kune dzimwe sarudzo dzakanaka dzekugadzirisa, senge kugadzirisa zvakare kuzarura uye kutarisa uye kushandisa akasiyana kumashure mhedzisiro. Heino muenzaniso pazasi wemufananidzo wakarongedzwa uchishandisa yakavakirwa-mukati P30 Pro maturusi:
Huawei P30 Pro kamera ongororo (Yakagadziriswa Monochrome) IBTimes India / Sami Khan
Kana iwe uchingoda kungonongedza uye kupfura pane kuongorora izvo zvisingaperi maficha eP30 Pro kamera, iwe haugone kuwana iri nani sarudzo. Iyo Master AI chinhu chinobatsira uye chinodiwa-zvakanyanya kuti upe ako mafoto ayo anoshamisa, asi echisikigo, maitiro kuitira kugovana pasocial media chiteshi hazvizodi chero post-edits.
Ini handigone kushushikana kuti chokwadi chakabatwa sei paHuawei P30 Pro uye mavara ari pachinhanho. Asi ini ndakacherechedzawo zvimwe zvinopesana muMaster AI kurongedza sezvo yaizopa zvakasiyana mitsetse yemavara, kunge bhuruu mudenga, kana yapfurwa kubva kune yakafanana kona. Kuti uwane zvakanyanya zvakasikwa uye zvishoma kudhiza mhedzisiro, kudzima Master AI kunogona kubatsira, asi kugadzirisa mufananidzo kwaizove kwakakosha usati wagovana. Pane imwe nhanho, ini ndakawana iyo Samsung Galaxy S10 + pfura mifananidzo iri nani nemavara ayo anodziya marudzi.
Ini zvakare ndaida iyo RAW fomati yeP30 Pro kamera, iyo yaizonditendera ini kuti nditore yakanyanya ruzivo uye kunyange kutendera Photoshop gare gare. Ndiri kuzoedza kudhinda mamwe mafoto akapfurwa kubva kuP30 Pro kuti ndikupe maonero ekuti rakakura sei RAW fomati.
Heano mamwe ma sampuli akatorwa kuP30 Pro. Ipfungwa yakapusa uye kupfura kunoitwa pano.
Akanakisa Huawei P30 uye P30 Pro kesi: P30 dziviriro, kubva pa £ 8 kusvika pa £ 24